क्वारेन्टाइनको किन र कसका लागि ?
यो आलेख तयार गर्न लाग्दै गर्दा कोरोनाबाट विश्वमा ४ लाख ८२ हजार ७ सय ५२ जनाको मृत्यु भएको छ । संक्रमितको संख्या ९४ लाख ३१ हजार ९ सय ७३ रहेको छ । कोरोनालाई जित्नेको संख्या ४७ लाख ४६ हजार १ सय १८ पुगेका छन् । अहिले ४२ लाख ३ हजार १ सय ३ जना आईसोलेसन तथा क्वारेन्टाईनमा उपचारत छन् । नेपालमा जम्मा संक्रमित संख्या १० हजार ८ सय ३६ । निको भएको २३ सय ३८ र मृत्यु संख्या २५ जना रहेको छ । यसमध्ये आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनमा रहको संख्या ८ हजार ४ सय ७३ रहेको छ ।
क्वारेन्टाईन भन्ने शब्द र यसका अगाडि पछाडि बिभक्ति र बिसर्ग जोडिएर बनेका वाक्यका बारेमा अझै पनि थुप्रै भ्रम र अफवाह जारि नै छ । यही क्वारेन्टाईनको अप्रेसन गर्ने प्रयास हो यो आलेख । गत डिसेम्बरको अन्तिम साता चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोविड–१९ सँगै क्वारेन्टाइन शब्दको धेरै प्रयोग भएको पाइन्छ । क्वारेन्टाइन शब्द वेनसन भाषाबाट लिइएको हो । यसको अर्थ ४० दिन भन्ने हुन्छ । इशापूर्व सातौं शताब्दीमा नै क्वारेन्टाइनको अभ्यास भएको पाइन्छ । इशापूर्व सातौं शताब्दीमा मोसाको व्यवस्थाअनुसार बाइवलको पुस्तक लेवी १३ अध्यायमा छाला सम्बन्धि संक्रमण भएका मानिसहरुलाई संक्रमण फैलनबाट बचाउन सात दिनसम्म अलग राखी उपचार गर्ने प्रचलन थियो । यदि सात दिनसम्म पनि केही सुधार नभएमा त्यसलाई फेरि सात दिनसम्म अलग राखेर हेर्ने गरिन्थ्यो । यदि रोग निको भएमा त्यस व्यक्तिलाई समाजमा घुलमिल गर्न छुट थियो । निको नभएमा फेरि सात दिनसम्म अलग राखिन्थ्यो । यसरी हेर्दा प्राचिन समयदेखि नै महामारीजन्य रोगहरुमा मानिसलाई रोग एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा फैलिन नदिन संक्रमित र शंकास्पद व्यक्तिहरुलाई परिवार समाजबाट केही समय अलग गरी उपचार गर्ने प्रचलन विश्वभर रहेको पाइन्छ ।
सन् १३४८ देखि १३५९ सम्म युरोपमा प्लेग रोग फैलिदा शंकास्पद मानिसहरुलाई रोग फैलन नदिन अलग्गै राखेर उपचार गरेको पाइन्छ । दक्षिणपूर्वी युरोपको क्रोएशीया देशले यहाँ आउने जहाजका मानिसहरुलाई एक टापु (आइल्याण्ड) ३० दिनसम्म अलग्गै राख्दथे यस समयलाई ट्रेन टाइम भनिन्थ्यो । पछि सन् १४४८ मा यसलाई बढाएर ४० दिन बनाइयो । त्यहीबाट क्वारेन्टाइन शब्दको सुरुवात भयो । यसरी हेर्दा क्वारेन्टाइन शब्दको अर्थ ४० दिन हुन्छ । त्यसैगरी, विश्वका ठुला महामारीहरु प्लेग, येलो फिवर, हैजा, आदिमा पनि मानिसहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर रोग फैलनबाट बचाइएको थियो ।
नेपालमा विक्रम सम्बत १८५७ मा जंगबहादुर राणाले कुष्ट रोगीहरुलाई काठमाडौंको खोकनामा अलग राखेर उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाएको पाइन्छ । त्यसैगरी विक्रम सम्वत १९८० मा चन्द्र शमशेर उनकी श्रीमतीलाई टिवी रोगले सताउदा काठमाडौंको टोखा जंगलको विचमा टिवी उपचार गर्ने घर बनाएर केही समय त्यही बस्ने व्यवस्था मिलाएका थिए । जसलाई स्वास्थ्य निवास भनिन्थ्यो । आज त्यही स्वास्थ्य निवासमा आर्मी अस्पताल बनेको छ ।
नेपालको परिप्रेक्षमा क्वारेन्टाइनको राम्रो प्रयोग भएको पाइन्छ । विक्रम सम्वत १९९० मा कोलेराको महामारी भएको बेलामा जुद्ध शमशेरले टेकुमा कोलेरा उपचार गर्ने छुट्टै स्थानको व्यवस्था मिलाएका थिए । त्यो स्थान मानव वस्तीबाट अलग थियो । त्यहाँ कसैको मृत्यु भएमा आर्यघाट लान पाइदैनथ्यो । त्यस्ता लाशलाई त्यही जलाउने व्यवस्था मिलाइएको थियो । त्यही संस्था विकासित भएर अहिले राष्ट्रिय जनसंख्या प्रयोगशाला र टेकु अस्पताल भएका छन् ।
यसरी इतिहास पल्टाएर हेर्दा हाम्रो देश नेपालमा पनि विभिन्न महामारीको समयमा संक्रमणलाई रोक्न क्वारेन्टाइनको प्रयोग सफल रुपमा रहेको पाइन्छ । यति मात्र होइन विश्वका विभिन्न जाति र धर्म मान्ने समुदायले समेत विशेष समयमा मानिसहरुलाई सरुवा रोग लाग्नबाट बचाउन फैलन नदिन अलग राखेर उपचार गरेको प्रमाणहरु पाइन्छ । साधारणत कोरोना भाइरसले संक्रमण गरेको ६ दिनसम्म कुनै पनि लक्षण नदेखिन सक्ने र ६ दिनपछि ८ दिन भित्रमा लक्षण देखाउन सक्ने तर, पूरै १४ दिनसम्म रोग सार्न सक्ने भएकाले १४ दिन देखि १७ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको हो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड पूरा गरेका क्वारेन्टाइनहरु सायद नेपालमा कमै होलान् । विश्वको विकसित देशहरुलेसमेत थेग्न नसकेको यो जटिल परिस्थितिमा अल्पविकसित देशहरुले सबै मापदण्ड पूरा गरेका क्वारेन्टाइनहरु बनाउन सम्भव पनि नहोला तर, मध्यम स्तरको बनाउने कुरामा पनि धेरै कमिकमजोरीहरु भएका छन् ।
सुनसरीको एक क्वारेन्टाइनको अवस्था । फोटोः लेखक आफैं
नेपालको कतिपय ठाउँहरुमा क्वारेन्टाइनमा बस्दा जेल जिवन वा हिरासतजस्तै लागेर वितृष्ण जाग्यो र कति मानिसहरु त्यहाँबाट भागेको समाचारहरु नआएका भने होइनन् । कतिपय मानिसहरु अज्ञानताले गर्दा क्वारेन्टाइनभित्र पनि विना माक्स समूहमा बसेर गेम खेल्ने, रमाइलो गर्ने गरेको पाइयो । एक जनाले खैनी माडेर दश जनासम्मलाई वितरण गरेकोसमेत पाइयो । यसले गर्दा सम्पूर्ण क्वारेन्टाइनमा नै क्रस इन्फेक्सन हुने चान्स बढेर गयो । यसले गर्दा क्वारेन्टाइन नै खतरामा पर्ने सम्भावना रह्यो । यदि नेपालमा भाइरस म्युटेड हुने थिएन भने यसले धेरै मानिसको ज्यान लिने खतरा प्रवल थियो । संक्रमणको यति जोखिम हुदा हुदै पनि क्वारेन्टाइनको फितलो व्यवस्थापनले गर्दा कतिपय ठाउँहरुमा महिलाहरु हिंसा पीडित हुन पुगे भने कति ठाउँमा त बलात्कृतसमेत भए । यसले क्वारेन्टाइनको मर्म र भावनालाई कुठाराघातसमेत गर्यो । क्वारेन्टाइन कतै पनि सामाजिक भएको पाइएन । यो फगत ठुलै अपराध गरेर आएका मानिसहरुलाई राख्ने सुधार केन्द्रजस्तो मात्र हुन गयो । क्वारेन्टाइन राख्ने सवालमा मानिसहरुको चेतनाको कमिले गर्दा कतिपय ठाउँहरुमा ठुलो वाधा विरोधहरु पनि भए । मानिसहरुले आफैंले आफूलाई चिन्न सकेनन् । र यदि आफू पनि संक्रमित भइयो भने कहाँको क्वारेन्टाइनमा बस्ने भनेर सामान्य तरिकाले समेत चिन्तन गर्न सकेनन् । यसो हुनुको प्रमुख कारणहरुमध्ये विभिन्न संचार माध्यमहरु र सामाजिक संजालमा भएका भ्रमात्मक समाचारहरु पनि एक हुन् ।
यो समय हाम्रो लागि सिकाइको समय पनि हुन पुग्यो । कोरोनाको कहरबाट हामीले प्रत्येक वडामा कम्तिमा एउटा सामुदायिक भवन बनाउनै पर्छ भन्ने पाठ सिक्यौं । यदि सामुदायिक भवन हुन्थ्यो भने अहिलेजस्तो अव्यवस्थित र विवादित विद्यालयहरुमा क्वारेन्टाइन राख्न पर्दैनथ्यो ।
अन्त्यमा अब सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई कोरोनाको विषयमा तालिम दिएर गाउँ गाउँमा मानिसहरुलाई जनचेतना जगाउने खालका कार्यक्रमहरु गर्न जरुरी छ । स्वास्थ्यकर्मीसँगै सामाजिक मनोबिमर्शकर्तालाई पनि परिचालन गर्नु पर्दछ जसले फाटेका मनमा मल्हमपट्टी लगाउने ती मनहरुलाई सिलाउने काम गर्दछन् । यसले समाजमा क्वारेन्टाईनको डर, त्रास र बाध्यताबस भोग्नु परेको पीडाबाट मुक्ति दिन्छ अनि आत्माहत्या र डिप्रेसनको समस्यालाई समेत कम गर्दछ । कतिपय ठाउँहरुमा क्वारेन्टाइनमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत कोविड–१९ पोजेटिभ भएका मानिसहरुलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने असामाजिक व्यवहारले उनीहरुमा एक प्रकारको भावनात्मक असरहरु देखिएका छन् । त्यस विषयमा कसैको ध्यान गएको देखिन्न । यस्ता विषयलाई बेलैमा हल गर्न जरुरी छ । नत्र बेलैमा समाधानको उपाय नखोजे यसको असरले दुरगामी मानसिक समस्या ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न ।
त्यसैगरी, अब आउने दिनहरुमा कोरोनाको कहर कति दिनसम्म रहन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म विज्ञहरुबाट यकिन हुन नसकेको अवस्थामा विद्यालयहरुलाई क्वारेन्टाइनको रुपमा प्रयोग गरिरहन व्यवहारिक नभएको हुदा होम क्वारेन्टाइन वा क्वारेन्टाइनको नवीनतम् अवधारणा ल्याउन जरुरी छ । जसमध्ये होम क्वारेन्टाइन पनि एक विकल्प हुन सक्छ । यसमा शंकास्पद व्यक्तिलाई सिधै आफ्नो घरको कोठामा अलग्गै बस्ने व्यवस्था गरेर राख्ने १४ दिनपछि निश्चित ठाउँबाट नै स्याम्पल कलेक्सन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र पोजेटिभ भएका र उपचार जरुरी भए अस्पतालमा रेफर गर्ने नत्र घरमा नै स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मिलाउदा राम्रो र वैज्ञानिक हुन सक्छ । जुन परिवारमा पर्याप्त कोठाहरुको व्यवस्था छैन उनीहरुलाई स्पेशल टेन्टको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो गरेमा क्वारेन्टाइनको खर्चसमेत कम गर्न सकिन्छ ।
अब कोविड–१९ संग डराएर, निराश भएर हैन उच्च मनोवलका साथ देशमा भएका सबै निकायहरुले काँधमा काँध मिलाइ सावधानी अपनाएर विकल्पहरुको खोजी गर्नु र त्यसलाई सहि व्यवस्थापन गर्नुका साथै कोरोनाबाट बच्ने सबैभन्दा भरपर्दो उपाय भनेको सामाजिक दुरी कायम गर्नु नै हो । त्यसैले सम्पूर्ण जनताहरुले यसो गर्न सकेमा मात्र कोरोना विरुद्धको लडाइमा मानव जातिको जित हुनेछ ।
(डा. ओली इटहरी स्थिति इन्खा पोलीक्लीनिक प्रा.लि.का निर्देशक हुनुहुन्छ)